आखिर किन ? लमजुङको यो सुन्दर झरनामा गएर सेल्फी खिच्दा किन प्रहरीले पक्रेर लैजान्छ? यस्तो छ कारण – Hamro Nepali Samachar
Home/ समाचार/आखिर किन ? लमजुङको यो सुन्दर झरनामा गएर सेल्फी खिच्दा किन प्रहरीले पक्रेर लैजान्छ? यस्तो छ कारण
पछिल्लो समय आन्तरीक पर्यटकहरुले नयाँ ठाउँ जाने सेल्फी खिच्ने र टिकटक बनाउने प्रचलन बढेको छ । यसमा लमजुङको बेसीसहर नगरपालिका १ उदीपुरमा रहेको गाईखुरे झरना पनि पर्छ ।
त्यहाँ मानिसहरु जाने सेल्फी लिने र टिकटक बनाउने गर्न थालेका छन् । तर त्यहाँ जान र सेल्फी खिच्न टिकटक बनाउन अहिले लमजुङ प्रशासनले रोक लगाएको छ ।